Etu m si mebie aha ọma m na Social Media ... Na Ihe I Kwesịrị Learnmụta Na Ya | Martech Zone
Ịgụ Oge: 7 nkeji
Y’oburu na enwerem obi uto n’ile gi n’ihu mmadu, Obi siri m ike na d gha ahu m n’onye oma, ihe na-ato-ọchị, ma nwee obi ebere. Ma, ọ bụrụ na ahụtụbeghị m gị na ihu, ana m atụ egwu ihe ị nwere ike iche banyere m dabere na ntanetị mmekọrịta m.
Abụ m onye nwere mmasị. Enwere m mmasị na ọrụ m, ezinụlọ m, ndị enyi m, okwukwe m, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị m. Enwere m mmasị na mkparịta ụka na nke ọ bụla n'isiokwu ndị a. Enwere m ezigbo ọchịchọ ịmara ya mere ndị mmadụ kwenyere n'ihe ha na-eme yana ịkọwa ihe kpatara m ji kwere ihe m na-eme.
Ulo obibi m na-eto eto dị iche iche. Nke a gụnyere echiche niile - okpukperechi, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọrịta nwoke na nwanyị, agbụrụ, akụnụba… wdg. Nna m bụ ezigbo onye nlere anya na ezigbo onye Roman Katọlik. Ọ nabatara ohere iji gbajie onye ọ bụla ka anyị wee mebie achịcha ka ụlọ anyị wee meghee oge niile ma mkparịta ụka ahụ na-adịkarị mma ma na-asọpụrụ n'ụzọ dị egwu. Etoro m n’ezigbo ụlọ nke na-anabata mkparịta ụka ọbụla.
Ma, ihe ga-eme ka gị na ndị mmadụ na-ata achịcha bụ na ha lere ha n’anya, ha amata na ihe ị na-ekwu dị gị n’obi. Learned mụtara ebe na etu ha si too. Pụrụ ịghọta ihe mere ha ji kwere ihe ha mere na-adabere n'ahụmahụ na gburugburu ebe ha webata ná mkparịta ụka ahụ.
Social Media ebibighị aha ọma m
Y’oburu n’ichere m afọ iri gara aga, enwere m obi ike na ị hụla oke ọkụ n’obi m nwere itinye aka na soshal midia. Ọ bụrụ na ị ka nọ nso, ana m ekele gị na ị ka nọ ebe a - n'ihi na amalitere m ịmatakwu ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe m na-enwe obi ụtọ na ohere iji wulite njikọ ka mma ma ghọta ndị ọzọ nke ọma. Ọ bụ ọdọ mmiri na-emighị emi, ma a sị mpe.
Ohere inweta bụ ma ọ bụrụ na ị hụla m ka m na-ekwu okwu na mmemme, soro m rụọ ọrụ, ma ọ bụ nụgodi nke m wee gbakwunye m dị ka enyi na ọwa mgbasa ozi ọ bụla… M jikọtara gị na ntanetị. My ọwa mgbasa ozi ọwa bụ ihe na-emeghe akwụkwọ - m na-akọrọ banyere azụmahịa m, ndụ onwe m, ezinụlọ m… na ee… ndọrọ ndọrọ ọchịchị m. Ha niile nwere olile anya nke njikọta.
Nke ahụ emeghị.
Mgbe mbụ m chere echiche banyere ịdee post a, achọsiri m ike ịkọ ya Etu otu Social Media si mebie aha m, ma nke ahu gaara eme ka m bụrụ onye e meriri ebe m bụ onye na-adị njikere-so na-ekere òkè n'ọnwụ m.
Were ya na ị na-anụ iti mkpu si n'ọnụ ụlọ ọzọ ebe ndị gị na ha na-arụ ụka na-ese okwu. Gbaba n'ime ụlọ ahụ, ị ​​ghọtaghị ihe gbara ya gburugburu, ịmaghị nzụlite onye ọ bụla, na ị na-eti mkpu n'echeghị echiche gị. Ọ bụ ezie na mmadụ ole na ole nwere ike inwe ekele maka ya, ọtụtụ ndị na-ekiri ihe na-ekiri ya ga-eche na ị bụ onye nzuzu.
Abụ m onye ahụ. N'elu, na n'elu, na n'elu.
Iji mee ka nsogbu ahụ pụta, nyiwe dị ka Facebook dị njikere inyere m aka ịchọta ụlọ ndị kachasị ike na arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ. Anọ m na-eme ihe n'eziokwu n'amaghị mmetụta ndị ahụ. Emeghewo njikọ m na ụwa, ụwa hụrụ ugbua kachasị njọ nke mmekọrịta mụ na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na edere m mmelite (M na-akpọ ndị mmadụ #goodpeople) nke kọọrọ akụkọ banyere onye chụrụ àjà ma nyere mmadụ ọzọ aka… Aga m enweta echiche iri na abụọ. Ọ bụrụ na m tụbara ụlọ ahịa na mmelite ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ, enwere m ọtụtụ narị. Imirikiti ndị na-ege m ntị na Facebook hụrụ naanị otu akụkụ m, ọ jọkwara njọ.
Ma n'ezie, mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na-enwe obi ụtọ karịa ikwughachi omume m kacha njọ. Ha na-akpọ ya njikọ aka.
Kedu ihe gbasara mgbasa ozi
Kedu ihe mgbasa ozi na-enweghị mmekọrịta bụ ọnọdụ ọ bụla. Enweghị m ike ịgwa gị oge niile m nyere azịza ma kpọọ m ozugbo na nke ahụ abụghị ihe m kwenyere. Onye ọ bụla na-elekọta mmadụ mgbasa ozi melite na algọridim na-akwalite push na ịdọrọ na ebo nke ma ndị na-ege ntị na-aga agha. O di nwute, anonymity na-agbakwunye ya.
Ihe gbara ọkpụrụkpụ dị na usoro nkwenkwe ọ bụla. O nwere ihe mere ụmụaka ji etolitekarị nkwenkwe yiri nke nne na nna ha. Ọ bụghị indoctrination, ọ bụ nnọọ n'ụzọ nkịtị na kwa ụbọchị, ha gụrụ akwụkwọ ma kpughee nkwenye sitere n'aka onye ha hụrụ n'anya ma kwanyere ùgwù. Nkwenkwe a na-akwado nkwado oge niile site na puku kwuru puku ma ọ bụ narị puku kwuru puku mmekọrịta. Gwakọta nkwenye ahụ na ahụmịhe na-akwado ya na nkwenkwe ndị ahụ ka kpọchiri akpọchi. Nke ahụ bụ ihe siri ike - ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume - ịtụgharị.
Anaghị m ekwu okwu banyere ịkpọasị ebe a… ọ bụ ezie na enwere ike mụta ihe dị egwu. Ana m ekwu maka ihe dị mfe… dịka okwukwe na ike ka elu, agụmakwụkwọ, ọrụ nke gọọmentị, akụnụba, azụmahịa, wdg. Nke bụ eziokwu bụ na anyị niile nwere nkwenye ndị gbanyere mkpọrọgwụ n'ime anyị, ahụmịhe ndị na-ewusi nkwenye ndị ahụ ike, na nghọta anyị. nke uwa di iche iche n’ihi ha. Nke ahụ bụ ihe ekwesịrị ịkwanyere ugwu mana ọ naghị adịkarị na mgbasa ozi mmekọrịta.
Otu ihe atụ m na-ejikarị azụ ahịa bụ maka na m bụ onye ọrụ ruo mgbe m gbara ihe dị ka afọ iri anọ. Ruo mgbe m bidoro azụmaahịa m na were ndị mmadụ n'ọrụ, amataghị m nsogbu niile nke ịmalite na ịmalite azụmaahịa. Aghọtaghị m ụkpụrụ ndị ahụ, enyemaka a kpaara aka, ịza ajụjụ ọnụ, nsogbu nsogbu ego na ihe ndị ọzọ. Ihe ndị dị mfe… dịka eziokwu na ụlọ ọrụ na-abịakarị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ọnụahịa ha.
Yabụ, dịka m na-ahụ ndị mmadụ ndị ọzọ na-enwetụbeghị ọrụ ọ bụla na-enye echiche ha n'ịntanetị, m niile na-enye nke m! Otu onye ọrụ gara n'ihu na-azụ ahịa nke ha kpọrọ m mgbe ọnwa ụfọdụ gachara wee sị, "Amaghị m!". Nke bụ eziokwu bụ ruo mgbe ị nọ n’ọnọdụ onye ọzọ, naanị gị -eche ị ghọtara ọnọdụ ha. Nke bụ́ eziokwu bụ na ị gaghị akwụsị ruo mgbe ị ruru ebe ahụ.
Etu m si edozi ndi ndu m na ndi mmadu
Ọ bụrụ na ị soro m, ị ga-ahụ na m bụ onye na-emekọ ihe ọnụ, onye nwere echiche na ntanetị mana na ịkekọrịta na omume m agbanweela nke ukwuu n'ime afọ ole na ole gara aga. Nke ahụ bụ nsonaazụ siri ike nke ịhapụ ndị enyi, na-akpasu ezinụlọ iwe, na… ee… ọbụnadị na-atụfu azụmahịa n'ihi ya. Nke a bụ ndụmọdụ m banyere ịga n'ihu:
Ndị Enyi Facebook Kwesịrị Realbụ Ezigbo Friends
Algọridim dị na Facebook bụ nke kachasị njọ n'echiche m. N'otu oge, enwere m ihe dị ka puku asaa enyi na Facebook. Ọ bụ ezie na enwere m obi iru ala na mkparịta ụka ndị mara mma na ezigbo ndị enyi na Facebook, ọ kpughere mmelite kachasị njọ m nye mmadụ 7,000 niile. Nke ahụ jọgburu onwe ya ka ọ karịrị ọnụ ọgụgụ mmelite dị mma m kesara. My Facebook enyi nanị hụrụ ihe kachasị dị egwu, egwu, egwu na-adịghị mma nke m.
Enweela m ike Facebook karịa naanị ndị enyi 1,000 ma ga-aga n'ihu belata ọnụ ọgụgụ ahụ na-aga n'ihu. Maka ọtụtụ akụkụ, ana m emeso ihe niile ugbu a dị ka a ga - asị na ọ na - aga n’ihu ọha - ma akara m ya n’ụzọ ahụ maọbụ na ọ bụghị. Ntinye aka m agbadala na Facebook. Enwekwara m ike ịghọta na m na-ahụ ndị kasị njọ nke ndị ọzọ, kwa. M ga-agagharị na profaịlụ ha iji lelee ezigbo mmadụ ha bụ.
Akwụsịla m Facebook maka azụmaahịa. Emebere algọridim Facebook ka gi ịkwụ ụgwọ iji nweta mmelite peeji gị ma echere m na ọ bụ ihe ọjọọ. Ulo oru itinyere ọtụtụ afọ na-ewu ụlọ na Facebook weghaara ihe niile mana akwụ ụgwọ site n'aka ndị na-eso ụzọ ha losing na-efunahụ ego ha mere iji dozie obodo. Achọghị m ịma ma m nwere ike inweta azụmaahịa na Facebook, agaghị m anwale. Na mgbakwunye, achọghị m itinye ndụ m na ndụ m n'ihe egwu - nke a dịkwa mfe.
LinkedIn bụ naanị maka azụmahịa
M ka na-emeghe ka mụ na onye ọ bụla nọ na ya LinkedIn n'ihi na m ga-ekekọrịta azụmaahịa m, edemede metụtara azụmahịa m, yana pọdkastị m ebe ahụ. Ahụla m ka ndị ọzọ na-ekerịta mmelite nke onwe ha ebe ahụ ma na-enye ndụmọdụ megide ya. Wouldn'tgaghị abanye n’ime ụlọ ebe ị bidoro iti mkpu na ndị mmadụ… emela ya na LinkedIn. Ọ bụ ụlọ nnabata gị n'ịntanetị ma ịkwesịrị ịkwado ọkwa ahụ ọkachamara na ebe ahụ.
Instagram Bụ Ezigbo Mma
Enweghị obere ma ọ bụ mkparịta ụka, na ekele, na Instagram. Kama, ọ bụ echiche n'ime ndụ m na achọrọ m iji nlezianya dozie ma soro ndị ọzọ kerịta.
Ọbụna na Instagram, aghaghị m ịkpachara anya n'agbanyeghị. Nchịkọta bourbon m buru ibu emeela ka ndị mmadụ jikọọ na m n'ihi nchegbu na m nwere ike ịbụ onye aholicụrụma. If my Instagram was named “My bourbon collection”, a n'usoro nke bourbons m na-anakọtara ga-adị mma. Agbanyeghị, ibe m bụ m… nkọwa m dị karịa afọ 50. N'ihi ya, ọtụtụ eserese bourbon, ndị mmadụ na-eche na m aụbigara mmanya ókè. Oy.
N'ihi nke a, a na m ama ụma na mbọ m na-agbasa foto Instagram m nke foto nke nwa nwa ọhụụ m, njem m, mbọ m na-esi esi nri, na ịlele anya na ndụ m.
Ndị mmadụ… Instagram abụghị ndụ n'ezie… Aga m edebe ya n'ụzọ ahụ.
M n'ihu ọha na-eso m onwe Twitter akaụntụ mana m nwekwara ọkachamara maka Martech Zone na DK New Media na m nditịm nke. M na-eme ka ndị mmadụ mara ihe dị iche. M na-eme ka ha mata nke ahụ Martech Zone'S Twitter akaụntụ ka m… ma na-enweghị echiche.
Ihe m nwere ekele maka Twitter bụ na algọridim dị ka ọ na-eweta echiche ziri ezi banyere m karịa m tweets kachasị arụmụka. Na… arụmụka na Twitter nwere ike ịme ndepụta ndepụta mana ọ bụghị mgbe niile ka ị na-asọba. M nwere ndị kasị afọ ojuju mkparịta ụka na Twitter… ọbụna mgbe ha na-na omiiko arụmụka. Na, enwere m ike ịkọwa mkparịta ụka na-enwe mmụọ na-eji mmụọ ọma. Na Facebook, nke ahụ adịghị ka ọ ga-eme.
Twitter na-aga na-a siri ike ọwa m nye m echiche m na… ma m na-aghọta na ọ ka nwere ike imerụ aha m. Otu nzaghachi eweghara maka gburugburu maka mkparịta ụka nke profaịlụ m niile nwere ike ịkọwa mbibi. M na-etinye oge dị ukwuu n’ikpebi ihe m kesara na Twitter karịa ka m nwere n’oge gara aga. Ọtụtụ oge, anaghị m ebipụta mbipụta na tweet wee gaa n'ihu.
Bụ Kachasị mma na-agaghị enwe otu?
Ka ọ dị ugbu a, ana m atụ egwu ndị isi na ụlọ ọrụ m nke a na-akwanyere ùgwù nke na-enye ọzụzụ nke na-agaghị anara ọhaneze na mgbasa ozi. Mayfọdụ nwere ike iche na ọ bụ ntakịrị ụjọ… mana echere m na ọ na-ewekarị obi ike iji mechie ọnụ gị karịa imeghe onwe gị maka nkatọ na ịkagbu ọdịbendị anyị na-ahụ ngwa ngwa n'ịntanetị.
Ndụmọdụ kachasị mma, ọ dị nwute, nwere ike ịghara ikwurịta ihe ọ bụla na-akpata arụmụka nke nwere ike ịgha ụgha ma ọ bụ wepụ ya na gburugburu. Okenye m nwetara, ka m na - ahụ ka ndị a na - etolite azụmaahịa ha, na - akpọku m na tebụl karịa, ma bụrụ ndị ama ama na ụlọ ọrụ ha.
Ọ bụ eziokwu dị mfe na m kewapụrụ ndị na-ahụtụbeghị m ihu na ihu, ahụghị ọmịiko m, na ndị enwetaghị mmesapụ aka m. Maka nke ahụ, m na-akwa ụta maka ụfọdụ ihe m kerịta kemgbe ọtụtụ afọ na mgbasa ozi mgbasa ozi. Enwekwara m ọtụtụ ndị folks wee jiri mgbaghara rịọ onwe m, na-akpọ ha maka kọfị iji mata m nke ọma. Achọrọ m ka ha hụ m maka onye m bụ ma ọ bụghị ajọ caricature nke mgbasa ozi mgbasa ozi m kpughere ha. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị folks… kpọọ m oku, Ọ ga-amasị m ịchụkwudo.
Ọ bụghị ihe nwute na isi ihe na - elekọta mmadụ mgbasa ozi nwere ike ịbụ izere iji ya kpamkpam?
MARA: Emelitere m inwe mmekọahụ maka inwe mmekọahụ. Otu okwu kwuru n'ụzọ ziri ezi enweghị enweghị nsonye n'ebe ahụ.
Tags: douglas karrAha Facebookaha instagramNjikọ njikọaha onlineahaelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa oziaha twitter
Feb 22, 2021 na 4:47 PM
"Nke a gụnyere echiche niile - okpukperechi, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmasị nwoke na nwanyị, agbụrụ, akụnụba ... wdg."
A ga - ahụ gị dị ka nke dị ugbu a ma tinye ya ma ọ bụrụ na ị na-eji agụụ mmekọahụ eme ihe kama ịhọrọ. Anyị anaghị ahọrọ ka anyị kwụ ọtọ, nwoke nwere mmasị nwoke, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ọ bụ njirimara anyị.
Feb 23, 2021 n’elekere 9:46 nke abali
Ọ bụ ezigbo mma, m ga-emelite isiokwu ahụ dịka ọ bụ n'ezie ihe mmụọ ya bụ.
Feb 23, 2021 n’elekere 9:26 nke abali
M B RER love m n'anya na ị dere ihe a. Ọ na-egosi na ị mụtaghị ihe ọ bụla. Echiche izu ọjọọ gị, ịkpọasị, na nzuzu gị dum bụ nsogbu. Social media abụghị onye iro (dị ka i kwuru) ọ bụ n'ezie na ị bụ naanị onye asị… Cheta na tweet ebe ị flippantly kwuru "ka ha ụfọdụ ozodimgba gluu" banyere a redioaktivu ihihi na Japan? Echetara m… ọ bụ ụbọchị 10 gara aga. Nwere olileanya na aha gị na-aga n'ihu na trajector a.
Feb 23, 2021 n’elekere 9:44 nke abali
Zack, daalụ maka okwu gị. Echere m na ọ na-akwado edemede m na echiche nke mgbasa ozi mmekọrịta yana ị nwere anya dị egwu banyere m mgbe ndị ọrụ ibe m, ndị ahịa, na ndị enyi m anaghị eme ya. Achọrọ m gị nke ọma.